Inkinga ngezidumbu eziduve eKZN | Isolezwe
Inkinga ngezidumbu eziduve eKZN
Isolezwe / 4 September 2012, 11:00am /
ZILINGANISELWA ku-400 izidumbu eziduve emakhazeni kahulumeni KwaZulu-Natal ezinye zazo esezihlale izinyanga ezingaphezulu kweziyisishi-yagalombili.
Lesi simo singaholela ekutheni kuze kuphele indawo emakhazeni kahulumeni njengoba izidumbu zingena mihla namalanga. Abezempilo bagxeka imidanti ngokuhlonzwa kwezidumbu nokushoda kwamangcwaba kwabanye omasipala kanye nohlelo lokubhaliswa kwezidumbu kula makhaza.
Ngokusho kwelungu lesiShayamthetho saseKZN le-IFP, uNkk Usha Roopnarain, kulezi zidumbu ezingu-400 ezisemakhazeni esifundazwe, ezingu 125 zisemakhazeni aseFort Napier eMgungundlovu lapho sekubikwa nokuthi ezinye zazo sezize zabola.
URoopnarain ubesethimbeni lesiShayamthetho saseKZN elibhekele ezempilo ebelihambele kula makhaza ngeledlule kanti usenxuse uNgqongqoshe wezeMpilo, uDkt Sibongiseni Dhlomo ukuba angenelele.
Uthe ezinye zezidumbu emakhazeni asanda kwakhiwa aseFort Napier sezihlale khona zingalandwa kusukela ngoDisemba.
Umhloli wezidumbu ozimele nowake waba yinhloko yabahloli eKZN, uDkt Steve Naidoo, uthe amakhaza amakhulu kulesi sifundazwe ayakwazi ukufaka izidumbu eziningi ezingahlonziwe.
Amakhaza amancane ngakolunye uhlangothi athwala kanzima.
Uthe kwesinye isikhathi izidumbu kumele zibekwe phezu kwezinye ezinqoleni noma emashalofini phezulu.
“Lokhu kwenza kube nzima ukuya ezidunjini noma ukuzihambisa. Amakhaza amancane awanayo indawo eyanele yokufaka izidumbu ngazodwa,” kusho uNaidoo. Uthe izidumbu eziningi zikhubaza ukubanda kwefriji.
Isikhulu esiphezulu kwezokuhlonzwa kwezidumbu esifundazweni, uDkt Mandla Mazizi uthe amagama ezidumbu ezingahlonziwe yizihlobo kumele atholakale ngaphambi kwezinsuku ezingu-30.
“Kumele sazi igama lomuntu bese sithola izihlobo zizomlanda. Izihlobo zitholakala kalula uma umuntu eshone enepasi ephaketheni kodwa nalapho uma zingaveli izihlobo leso sidumbu sisithatha njengesingahlonziwe. UNaidoo uqhube wathi ngesikhathi esasebenzela uhulumeni kwake kwaba nezingxoxo zokuthi kuzokwakhiwa amakhaza amakhulu azogcina izidumbu ezingakahlonzwa eCato Ridge. Uthe kungenzeka ukuthi lolo hlelo lwabuye lamiswa ukuze izidumbu zigcinwe emakhazeni aseFort Napier.
UDkt uMazizi uthe kumele kutholwe ukuthi umuntu osuke eshonile ungubani zingakapheli izinsuku ezingu 30, emuva kwalokho usengangcwatshwa njengomuntu ongumhambuma. Uthe uhlelo lokuhlonzwa kwezidumbu luthatha isikhathi njengoba kumele uxhumane namaphoyisa eSAPS, uMnyango wezaseKhaya naboMnyango wezeMpilo okuyiwo osingethe amakhaza.
UDkt Mazizi uthe okwamanje izidumbu zizogcinwa emakhazeni kodwa kuzoya ngokuthi sikhona yini isikhala. Uvumile ukuthi ezinye izidumbu sezihlale isikhathi esingaphezulu kwezinyanga eziyisithupha emakhazeni.